Motorcycles katalọgụ na nkọwa, foto, ratings, reviews na discusssions | Motorcycles katalọgụ na nkọwa, foto, ratings, reviews na discusssions
Kawasaki Ninja 650R 2012 Price na India – nkọwa Bajaj Auto ka ẹkenam ndị niile ọhụrụ 2012 mbipụta nke Kawasaki Ninja 650R superbike urua. N'ihi na gị eze ozi Bajaj ka otú anya ere 3,000 nkeji na Ninja ezinụlọ, nke akpa ẹkenam n'afọ nke 2009. The ọhụrụ 2012 nlereanya a na-egbe nke Ninja 650R ẹkenam ke June 2011. Ka anyị niile maara, na Kawasaki bụ onye ndú na sports bike nke malite n'etiti Rs 2 to 5 lakh na a ahịa òkè nke 65 percent. Nke a bụ nke atọ adịchaghị sports moto bike ẹkenam na mba mgbe Kawasaki Ninja 250R na KTM 200 Duke. O doro anya na ya style na nhazi ga-eme ihe karịrị ọ na-eri. Kawasaki Ninja 650R 2012 nkọwa Anọ ọrịa strok, mmiri mmiri-mma, DOHC, anọ na-valvụ, ukem ejima engine 649 CC Ndahie 72 Ps @ 8500 RPM kacha ike 66 Nm torque @ 7000 RPM kacha torque Digital fuel injection abụọ 38mm Keihin trotul ozu 83.0 mm cylinder mụụrụ na 60.0 mm stoke 11.3:1 mkpakọ ruru TCBI na electronic tupu mgbanye 15.5 ltrs mmanụ ụgbọala ikike malite onwe Alloy wiil na 1410 mm wheel isi Front -120 / 70-17 ZRI7M / C (58W), N'azụ-160 / 60 - 17 ZRI7M / C (69W) taya 6 speed gia igbe Dual 300 mm afọ anụ petal n'ihu diski na abụọ pistin calipers brek Single 220 mm petal n'azụ diski na otu pistin caliper breeki 41 mm telescopic ndụdụ / 120 mm n'ihu nkwusioru Nke a bụ a nkecha bike enwe Ewepụ Ihe Mgbochi arọ nke 460.8 lbs na 31.7 oche ...
2009 Honda CB1000R - Road Test Machibidoro Iwu Fun: The kacha mma Honda ị ike ịzụta! Props ka Honda maka iwuli a mma chopper na-arụ ọrụ. Isi n'aka maka nwekwara-enye anyị onye na akpaaka-trans-onwem ọgba tum tum / skuuta-dị ka iga na ngwaọrụ na nwere na-otu n'ime ndị kacha-to-agba ịnyịnya na-size abụọ wheelers mgbe. ma, n'eziokwu, Honda, gịnị mere i ji na-ejide si na anyị? Ịja mma reviews kelee CB1000R n'elu ya iwebata na Europe n'afọ gara. N'ezie, a CBR1000RR dabeere ọtọ bike okokụre abụọ na 2008 si International Bike nke Year ịtụ vootu, na na anyị na U.S. ndị na-efunahụ nke bike emeghị ọbụna na-votu maka ya! Ụfọdụ ọwọrọiso ruturu si European odeakwụkwọ? "A ibu nzọụkwụ maka Honda na gba ọtọ, Atiya,"Kwuru Bike Scandinavia. "O doro anya outshines ndị asọmpi na ya enweghị ntụpọ engine, ezi brek na-egbusi njikwa. " Editors na Belgium si Motor Wereldwere dokwara full otuto, ọbụna ma ọ bụrụ na ha pụọ ​​ka a echekwabara mmalite: "Na nọmba, na CB1000R bụ kpọmkwem ụdị bike na akwusila na rog si n'okpuru ụkwụ gị. Nke a bụ na ọdabara ka ma ndị engine na Chassis. Otú ọ dị, nọkwa na ọ na-eme ka ị na-aghọta nnọọ ihe a finely ezi bike Honda ntà gba ọtọ bụ n'ezie; a nguzozi nke na-agbakwụnye ruo kpọmkwem, mfe na fun njikwa. Ihe na-akpata a torquey, sweet-agba ọsọ engine na e ọ bụ, thenaked bike nke afọ. " Ya mere, anyị kpebiri-ahụ onwe anyị ihe niile nsogbu oge bụ banyere na gbaa akwụkwọ a ụgbọ elu na Europe. Anyị finagled a bike nke Honda Austria na ...
ahụrụ: Moto Guzzi Norge The Moto Guzzi Norge anọwo na mpụta nke m maara nke touring anyịnya igwe ruo oge ụfọdụ. Otu n'ime ndị ọzọ pụtara ìhè ụdị na ahịa, ọ na-eme ka otu n'ime ndị kasị mma ọnụ na kasị dị irè - ma ọ bụrụ na otu n'ime kpụ ọkụ n'ọnụ karịsịa. Na a ọhụrụ nlereanya wepụtara n'afọ a gara aga, dị ka akụkụ nke a na-agawanye itinye Moto Guzzi na mainstream, na Norge agaghị ekwe omume na-eleghara ọbụna taa mmadụ jupụtara na touring ahịa. Dị ka ọtụtụ ndị Italian ọgba tum tum sịrị, Moto Guzzi bụ incredibly mpako nke ya nketa, na Norge nwere a karịsịa pụrụ iche otu. Ọ kpọ aha-ya mgbe GT Norge, ụlọ ọrụ groundbreaking 1928 nlereanya - ya onwe ya aha ya bụ n'ihi na airship ahụ bụ nke mbụ ha na-efegharị n'elu North osisi. The 500cc GT Norge dechara a 4,000-mile ule ride si ụlọ ọrụ Italian HQ na Norway si Lapland, na n'ime onu nke Arctic gburugburu. Ọ bụ ụdị nke na-agba ịnyịnya na anyị ga-ewere dị ka ihe The Epic cross-continental njem ọbụna taa, na na 1928 ọ ọbụna otú nyere ala nke okporo ụzọ. The ụlọ ọrụ nwere a uche iji gosi na: ha n'azụ swingarm nkwusioru Mbido - nke mbụ ya ụdị - arụkarị ọrụ, na ike nwee njem nke ukwuu anya karịa ndị ma gānagide. Engineer Guiseppe Guzzi mere njem na izu anọ. Mgbe Norge e reintroduced na 2005, ya pụta na ifufe-ọwara-e fairing na a n'oge a v-ejima engine na accoutrements, na dechara na otu ride. The nkwupụta nke nzube doro anya, ezie na ọ bụ na-enweghị ...
2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 Nyochaa & # ...
2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 | Review High-Tech Classic Mgbe a afọ isii ahapụ okporo ụzọ, Kawasaki na-reentering zuru-uwe touring ahịa na nkà na ụzụ na-atụ, nostalgically imezi, 2009 Voyager. Kawasaki na-touting ọhụrụ ha Vulcan 1700 usoro dị ka a bellwether maka ụlọ ọrụ ga-eme n'ọdịnihu na ugbo agha nke, na echeregharị Chọgharịa Voyager e nyere dị ka ha na nrughari akara si luxe flagship. Na ya ogologo ọrịa strok 1700cc V-ejima engine na bulging '60s muscle ụgbọ ala styling riffs, na 1700 Voyager yiri a husky American nwa nwanne nna nke inline anọ Voyager XII na pụrụ n'elu mmiri na 2003. The Voyager ọhụrụ Occidental wardrobe bụ visual nko Kawasaki atụmatụ ịzụlite a ọgba tum tum na ọ na-enwe olileanya ga-erigbu a adabaghi ​​ekpe site na mpi-ya bụ, a elu-tech metric V-ejima kwadoro, zuru-akwa ugbo agha. The touring nke ugbu ibu trajectory karịrị ike ndọda nke ọgba tum tum ụlọ n'ozuzu sales ojuju, na Kawasaki ahụ disposable ego na ha Thar saddlebags. The ụlọ ọrụ na-ịkụ nzọ na a muscular ọhụrụ mile-eater na showroom n'ala ga-akwalite mbo ya ọgụ megide Ụwa. Development nke Vulcan 1700 usoro (nke na-agụnye ndị maara Classic, Classic lt na Nomad) bụ a n'elu-ala mgbalị, ibido ilekwasị anya Voyager. The Voyager ochie anya / ọhụrụ tech anọ na na-emeta ndị Ewepụ Ihe Mgbochi. Gara na (na ọtụtụ ebe) unlamented bụ pointy akụkụ, zoro ezo engine, boxy ...
Honda rc166 isii cylinder bike si 1960...
Honda rc166 isii cylinder bike si 1960 GỤKWUO na Honda RC166 250/6. Grand Prix ọduọ wara a mgbanwe ke n'oge 1960. Honda isii-cylinder bịara ọnụ ngwa ngwa. Iji lelee olu nke Honda RC166 Six sịlịnda gaa njikọ n'okpuru plus crank. Nke ahụ bụ otu ụtọ sounding bike. M nụrụ otu on Middle-Ohio afọ tupu. ọ zitere. Dị ka nke Nr na Le Mans plus Production Bikes. Honda wee banye n'ụgbọ ka isii cylinder DOHC powerplant a eziokwu na ya. Honda efehe site 1960 na. a 50 CC Mmaji, a 125 CC isii cylinder plus a V8 maka. ha nwere ugbu a ụfọdụ 5 inyinya karịa Honda isii. The RC166 of 1967 bụ otu ihe ahụ bike ka. Honda RC166 isii cylinder bike dị ka nke 1960 pt2: Honda RC166 Ozi: Honda RC166 Wallpapers. Telegraph banyere Honda RC166. aha otutu: comment: dị ka nke 1960, Honda banyere. Japanese ọduọ igwe na-emesapụ aka isii cylinder. The nnukwu ihe dị iche na nkọwapụta n'etiti a ụzọ plus agbụrụ bike bụ. Maka ọrụ motocross anyịnya igwe. Honda malitere ịbanye ya mmepụta ọgba tum tum na Superbike. 4 valves bụla cylinder: RC143: 1960: Ejima: 44 × 41 mm: 124.68 CC (8. Ọ bụ Honda mbụ mmepụta ọgba tum tum na isii. mbụ ọgba tum tum na Honda wuru na isii cylinder bụ RC166 250cc agbụrụ bike na e ji mee ihe. Honda ọduọ – akụkụ 1. Honda ọduọ 1960 ;. Honda 250cc RC166. a ọhụrụ isii cylinder egosi. O yiri nke a bike bụ doro anya na ukwuu karịa RC166. Honda RC166 ringtone. Nke a na oge ọ bụ Mike Hailwood ...
Anana-mbiet Motorcycles A Brief History nke Marque: enweghị atụ, The Collier dere ụmụnna wuru mbụ ha igwe na 1899, na site 1907 na-na-emeri na Isle of Man TT agbụrụ. Esonụ a abụọ na 1908, ha meriri ọzọ 1909 na 1910. Mgbe WWI mmepụta maliteghachiri iji engines si ma JAP na Mag . Fraị May 24 2013 duhoda76wanadoo.fr jmpot Rally France video video France April 2013 Ehihie ọma, My aha ya bụ JT Davis, M ihe Associate Producer na Sirens Media na anyị na-emi odude ise kilomita site United States Capitol. Anyị na-amị a ọhụrụ usoro maka Nchọpụta Channel banyere a-arụ ụgbọ onye Ndozi na-eweghachi Devid agụghị ndị gbara ọgba tum tum. Anyị Njirimara isii (6) anyịnya igwe n'elu a atọ-akụkụ usoro, onye ọ bụla merenụ na anyị na-eme atụmatụ ịkọrọ akpali nkọwa banyere ọgba tum tum nke na-achọ ụfọdụ eziokwu atule. M na-eme nnyocha iji chọpụta uru nke a ọgba tum tum na a pristine weghachiri ọnọdụ. The ọgba tum tum na mbụ na nwunye bụ a 1931 Anana-mbiet Model X na a Brough Elu Sidecar. M na-mmasị tupu mgbe foto nke bike na mweghachi. Nwere ike ị na-etinye m na kọntaktị na onye pụrụ were a bike tupu / post mweghachi? M na-aghọta na ọ ga-esi ike na-enye kpọmkwem uru n'amaghị nkọwa nke otú bike e weghachiri, ihe ngwaahịa na-eji na-elekọta e iji mee ka ọ dịghachi ndụ. Otú ọ dị, a ballpark ọgụgụ na a visual ntule nwere ike inyere-enye ihe ọmụma ziri ezi na Discovery Channel ekiri. ...
Moto Morini Kanguro na Dart – Classi ...
Moto Morini Kanguro na Dart Ọtụtụ ndị na-agbasaghị plump n'ihi na otu onye nke a maara nke ọma Morini Sport ma ọ bụ Strada ụdị. Ma na-abụghị nsọtụ nke ọnụ ọgụgụ ị ga-ahụ nke ibu-sleek Dart na rufty-tufty Kanguro. Ya mere, olee otú Ken Philp abịa aka ma? Mbụ m hụrụ a Kanguro na Earls Court na 1982, na masịrị dị ka ọ bụ ihe anya-ụzọ V-ejima. M nwere nsogbu ahụ ike na 1984, otú ọkọdọ Bibie ọtụtụ anyịnya igwe ma zụta nke a otu, mbụ Kanguro nke NLM nwere na shop. Ọ nọgidere nnọọ na-aga mgbe ọ bụla m chọrọ ka ọ! Ọ nyere m ọtụtụ ihe ụtọ anya-ụzọ, N'agbanyeghị na ibu, na m a shortie – 5'5. M naanị ọkọdọ tufuo ya na 2003 n'ihi na m na naanị nwere 15% akpa ume ike ugbu a. M nwere ike ikwu na e nwere ihe ọ bụla na ọ naghị amasị m banyere ya. M na-eji ya maka enduros, nzọ-na-anọkwasị, Weston Beach Race, anya ọnwụnwa, were gabazie, na mgbe kpuchie 720 kilomita na 20 awa na ihe MCC omume. Na ngụkọta m kpuchie banyere 16,000 kilomita. E nwere ndị na-enweghị ezi nsogbu, naanị ndị e m kpatara! Onye ọ bụla na-azụ a Kanguro ga na-doro anya nke mbụ X-ụdị. The X1 na X2 nwere tubular okpokolo agba, na X cracks eku nri footrest ebe. The X1 nwere mkwado e. The headlamp bụ naanị AC kpọmkwem ìhè, otú mmepụta dịgasị na engine ọsọ. Ọ bụ na-a 6-volt ọkụ usoro, na a nnọọ obere batrị! Ya mere, ọ nwe Kanguro si ọhụrụ, M n'ezie nnọọ mmasị na moto. M wee hụ a foto nke a ọhụrụ Dart na pịa, ma ọ bụghị ...
Dị nnọọ ọzọ WordPress.com weblog 2004 Big Dog Ridgeback Fonzie kwuru: M hụrụ Ridgeback na-akpali akpali, ebigbọ na n'ọkpụkpụ azụ tingling - mgbe ahụ, ọzọ, nke nwere ike ịbụ nnọọ m spinal discs smashing ọnụ (na a ezi ụzọ) - isiike choppers na-adịghị pụtara inwe ahụ iru ala na ike-assed biker ụdị-amasị-egosi ha mgbu ndidi na a raucous na kpamkpam chromed dị ụzọ. Ee, M maara na Motorcycle.Com bụ n'ezie ebe bikers-abịa na-agụ banyere ndị ọhụrụ na ígwè inyinya, ma ha ga-ọ bụrụ na m nwere ike inyere ya. Motorcycles bụ ọgba tum tum na ọ bụrụ na i nwere ike n'anya Concours, mgbe mkparị ya n'otu oge, eleghị anya ị na-aghọta ebe ndị anyị na chopper ụwa si na-abịa. Ya mere ọzọ, ee, nke a bụ a ọgba tum tum na ọ bụ anụmanụ,! Igwu ndị padded spandex ịnya nịịka na-echebe iko ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ, a ọgba tum tum ga na-agbalị imebi gị. Ọ bụrụ na ị na-adị ndụ gị nile ibe n'ibe na-emebibeghị, eleghị anya ị ga-abịa n'ụlọ na a ole na ole ọzọ nọmba ekwentị karịa gị ekpe na na ị ga-n'ezie a oké akụkọ na-agwa na ụmụaka ... Ok, ma eleghị anya, ọ bụghị ụmụaka, ma gị buddies ga-n'anya na-anụ 'em. Ma e wezụga n'ihi na otu onye banyere oge mgbe ị na-tọrọ atọ na Boulevard ekele Ridgeback si obere idobere tank na naanị ole i nwetara bụ ụfọdụ Dude ulo si Brothers club; mgbe ọ dịghị onye chọrọ ịnụ gị akụkọ. Ndo, na-eche banyere ya. Inyefe-na na a wheelbase nke fọrọ nke nta 9 ụkwụ na a Ndahie nke 1750cc, na Big Dog Ridgeback bụ a isi Turner ...
KTM 450 Rally oyiri Dị ịtụ & # ...
KTM 450 Rally oyiri Dị ịtụ The KTM 450 Rally oyiri ga-abụ dị ka ọha na eze, ma ọ bụ ihe edoghị ma ọ bụrụ na ọ ga-abịa na US. KTM notched ya 13 consecutive Dakar Rally merie na 2014, na Marc Coma gụchara fọrọ nke nta ka awa abụọ n'ihu ya, ezigbo mpi. The Spaniard agha bụ emelitere version of KTM si 450 rally bike, a version nke Orange ika ka a mara ọkwa ga-abụ dị ka ọha na eze. The KTM 450 Rally oyiri atụmatụ a rụgharịrị etiti na emelitere ergonomics, ọhụrụ n'azụ nkwusioru na mba-pụtara, mmanụ ụgbọala-agbara 450cc engine. N'ihi na rally oru na oyiri na-abịa na a n'ihu ma n'azụ mmanụ ụgbọala-mgbapụta na multiple tankị nakwa ịgbatị nso. The na-aga price, dị ka e gosiri site pịa ntọhapụ n'okpuru, bụ EUR 24,000, nke dị ka a na-ede isiokwu a na-atọghata na gburugburu $32,988. Ọ bụ ihe edoghị ma Rally oyiri ga-abụ dị na US ahịa. – MotoUSA Byron Wilson The ọhụrụ nlereanya nke KTM 450 Rally igwe na factory livery mere ya mpụta mbụ ke October na Morocco rally dị ka a mbụ na ule ikpeazụ na mba ọnọdụ. The igwe bụ mgbe ahụ n'okpuru-ewere na ule kasịnụ na Dakar, na bike wee na-arụ ọrụ flawlessly ofụri 9,000km agbụrụ na Marc Coma na-osisi na-KTM nke 13 consecutive mmeri. Dị ka ndị gara aga nlereanya nke rally ígwè e wuru maka 690cc oge, ọhụrụ a igwe e mere si n'ala bilie ka ruru eru na-taa Dakar ...
2013 MV Agusta F3 First Gbaa ịnyịnya – Euro C ...
2013 MV Agusta F3 First Gbaa ịnyịnya Na ihu nke zuru ụwa ọnụ sportbike sales slump, boutique Italian ọgba tum tum ika MV Agusta na-aiming revitalize na agaghinihu Middleweight supersport ahịa na ya na nso nso tọhapụrụ F3. Kwadoro site na ihe ultra-kọmpat 675cc atọ cylinder engine, na F3 ($13,999) na-ọzọ European na-na ụzọ kasị mma isi na-abata site onu ire ka onu ire. Ọhụụ na-aghọ EZIOKWU A mụrụ afọ anọ gara aga, na F3 bụ nrọ nke MV si mbubreyo president, Claudio Castiglioni, onye ọrụ a atọ-cylinder sportbike tupu agabiga ikpeazụ n'oge okpomọkụ si cancer. Ịtụle ya gbanyesiri mkpọrọgwụ akụkọ ihe mere eme na ụzọ ọduọ, igwe e mere maka iwu na-na-achọ n'aka World Supersport - a zuru ụwa ọnụ ọduọ usoro na MV ezube ka mpi dị ka n'oge dị ọzọ oge. Na ngafe nke 20 nde Euro iri na ato E funneled n'ime oru ngo dum imewe ịbanye n'ụlọ MV ibuot itieutom ke edere edere Italy. The isi nke F3 bụ a mmiri mmiri-mma, inline atọ-cylinder engine na a 12-valvụ isi (niile valves na-chepụtara site titanium) ua site ejima yinye-chụpụrụ camshafts. Onye ọ bụla cylinder eji a dịtụ n'elu-square mụụrụ na strok akụkụ 79.0 x 45.9mm, apịpụta mmanụ ụgbọala ụgwọ a ruru nke 13:1. The engine si ala-ọgwụgwụ mîdaha a pụrụ iche a haziri nke crankshaft spins azụ. Nke a na-enyere neutralize-atụ inertia nke ọgba tum tum na-efegharị na-eme ka ọ na ihe na maneuverable na elu engine gbapụrụ ọsọ, MV kwuru. Dị ka ọtụtụ ihe Italian, ụdị ndị ọrụ ...
adịbeghị anya Ndenye
20.06.2015. Author: dima. Comments Off on ahụrụ: Moto Guzzi Norway Miss Motorcycle
ahụrụ: Moto Guzzi Norge The Moto Guzzi Norge anọwo na mpụta nke m maara nke touring anyịnya igwe ruo oge ụfọdụ. Otu n'ime ndị ọzọ pụtara ìhè ụdị na ahịa, ọ na-eme ...
20.06.2015. Author: dima. Comments Off on Anana-mbiet Motorcycles
Anana-mbiet Motorcycles A Brief History nke Marque: enweghị atụ, The Collier dere ụmụnna wuru mbụ ha igwe na 1899, na site 1907 na-na-emeri na Isle of Man TT agbụrụ. esonụ ...
Moto Morini Kanguro na Dart – Classic Motor ...
20.06.2015. Author: dima. Comments Off on Moto Morini Kanguro na Dart – Classic Motorcycle Roadtest – RealClassic.co.uk
Moto Morini Kanguro na Dart Ọtụtụ ndị na-agbasaghị plump n'ihi na otu onye nke a maara nke ọma Morini Sport ma ọ bụ Strada ụdị. Ma na-abụghị nsọtụ nke ọnụ ọgụgụ ị ga-ahụ nke ibu-sleek ...
20.06.2015. Author: dima. Comments Off on 2004 Big Dog Ridgeback Motortrend
Dị nnọọ ọzọ WordPress.com weblog 2004 Big Dog Ridgeback Fonzie kwuru: M hụrụ Ridgeback na-akpali akpali, ebigbọ na n'ọkpụkpụ azụ tingling - mgbe ahụ, ọzọ, nke nwere ike ịbụ nnọọ m spinal ...
20.06.2015. Author: dima. Comments Off on 2013 MV Agusta F3 First Gbaa ịnyịnya – Euro Cycles nke Tampa Bay
2013 MV Agusta F3 First Gbaa ịnyịnya Na ihu nke zuru ụwa ọnụ sportbike sales slump, boutique Italian ọgba tum tum ika MV Agusta na-aiming revitalize na agaghinihu Middleweight supersport ...
20.06.2015. Author: dima. Comments Off on Moto Giro Vintage Motorcycles
'66 Sears Gilera 106 The Moto-Giro California bụ ọnwa ole na ole n'ebe, ma nke a bụ nke zuru okè oge na-amalite atụmatụ na m nwere a akwa ebe na-amalite. A 1966 Gilera 106. ọ dabara ...
Blata mini motos Blata – amamiihe anyịnya igwe maka budding kpakpando. Dabere na ihe ụdị blata mini motos i nwere, engines ịdị iche iche na ruo 13HP na ị pụrụ ọsọ tinyere na 50mph ...
20.06.2015. Author: dima. Comments Off on Bajaj ọbọ 220cc review
Report ọdịnaya Bajaj ọbọ 220cc review Ngosi Transcript Bajaj ọbọ 220cc Review Anyị na-ada ka ị na enen ọma nke egbe nke ọbọ 220 on June 15 na ...
20.06.2015. Author: dima. Comments Off on 1969 BSA 441 Victor Special – Classic British Motorcycles – Motorcycle Ochie
njikọ Content Barry Porter si Benelli Sei 750 Barry Porter atụle inwe nọkwa ya Benelli Sei 750. Hụrụ na eBay: 1963 BSA thunderbolt Awagharị site na mbara igwe ...
20.06.2015. Author: dima. Comments Off on 1991 BMW 850 V12 6 Speed ​​Home Page
1991 BMW 850 V12 6 Speed 1991 BMW 850 6 Speed. 28K kilomita, mkpoko nwe akụkọ ihe mere eme ebe ọ bụ na ọhụrụ. Mara na ọtụtụ dị ka onye nke kasị mma ndụ ihe atụ nke ihe 8 usoro, ụgbọ ala kemgbe ...
20 Jun 2015 | Comments Off on 2009 Honda CB1000R Road Test Review- Honda CB1000R Motorcycle Nyocha
2009 Honda CB1000R - Road Test Machibidoro Iwu Fun: The kacha mma Honda ị ike ịzụta! Props ka Honda maka iwuli a mma chopper na-arụ ọrụ. Isi n'aka maka nwekwara-enye anyị onye na akpaaka-trans-onwem ọgba tum tum / skuuta-dị ka iga na ngwaọrụ na nwere na-otu n'ime ndị kacha-to-agba ịnyịnya na-size abụọ wheelers mgbe. ma, n'eziokwu, Honda, gịnị mere i ji na-ejide si na anyị? Ịja mma reviews kelee CB1000R n'elu ya iwebata na Europe n'afọ gara. N'ezie, a CBR1000RR dabeere ọtọ bike okokụre abụọ na 2008 si ...
20 Jun 2015 | Comments Off on Honda rc166 isii cylinder bike si 1960
Honda rc166 isii cylinder bike si 1960 GỤKWUO na Honda RC166 250/6. Grand Prix ọduọ wara a mgbanwe ke n'oge 1960. Honda isii-cylinder bịara ọnụ ngwa ngwa. Iji lelee olu nke Honda RC166 Six sịlịnda gaa njikọ n'okpuru plus crank. Nke ahụ bụ otu ụtọ sounding bike. M nụrụ otu on Middle-Ohio afọ tupu. ọ zitere. Dị ka nke Nr na Le Mans plus Production Bikes. Honda wee banye n'ụgbọ ka isii cylinder DOHC powerplant a eziokwu na ya. Honda efehe site ...
Honda CBR 600RR 2009 C-ABS Top Speed ​​280km / h Olee otú Iji Mee & Ime Eve ...
20 Jun 2015 | Comments Off on Honda CBR 600RR 2009 C-ABS Top Speed ​​280km / h Olee otú Iji Mee & eme ihe niile!
Gịnị ka i chere banyere nke a video? Zsotyesz87: na doo a comment:D izaky2011: dị nnọọ ka nna m bike! Jhon Camille Vergel: Ndị nne na nna na ndị a QE enyi? m sertgent: otú r6 ndibọhọ bediang80: ị wanna ịfụ gị engine ma ọ bụ ihe?? Fr3shChriS13: ok i na-eche IMA nweta a Yamaha r6. 2006 maka a mmalite vin ígwè: Holy freak m chọrọ a bike njọ, a na-eme ka ụgbọala m ele anya dị ka a tank. Leo Motte: mano Anụọhịa dị ka gị nwere ike na-ekwu na ogologo anụ na 280 ụzọ!!m nrọ pbmax: Bike ada ịtụnanya. john mgwakota: bullshat ...
20 Jun 2015 | Comments Off on 2005 Honda Silverwing ụdịdị eHow
2005 Honda Silverwing ụdịdị Trims The 2005 Honda Silver nku bụ a abụọ na-ebu touring skuuta na-abịa na abụọ trims, na Silver nku isi nlereanya na Silver nku ABS. The isi nlereanya dị na nwa na-titanium agba mgbe ABS nlereanya dị na duotone agba nke nwa / ọlaọcha na titanium / silver. The instrumentation panel awade nkiti atụmatụ dị ka njem odometer, mmanụ ụgbọala larịị ịdọ aka ná ntị na a elekere. The nanị isi ihe dị iche n'etiti abụọ ụdị bụ na ABS nlereanya-enye ihe ...
Repsol Honda History [ edit ] In 1995 otu banyere a 3 onye na-agba lineup na Mick Doohan. Alex Crivillé na Shinichi Itoh nọkwa na Honda NSR500. Mick Doohan merie ndị World Championship nke ugboro abụọ na a n'usoro na Argentina. na otu agbụrụ ekpe maka njedebe nke oge asaa agbụrụ Enwee Mmeri, Alex Crivillé okokụre oge anọ na 1 agbụrụ mmeri mgbe Shinichi Itoh okokụre ise n'ozuzu. The anọ onye na-agba akara-elu wee na- 1997 na Michael Doohan. Alex Crivillé na Tadayuki Okada ...
19 Jun 2015 | Comments Off on Day6 dream review Bike wa
Day6 Dream Review Taia Front / N'azụ Kenda Komfort 26 x 1.95 Rim mgbidi abụọ, CNC sidewall, alloy Casette Shimano Derailleur Front / N'azụ Shimano Altus 21 speed Shifter Sram MRX mkpokọta + Freewheel Shimano Back Day 6 Omenala Ọgwụ Kpụrụ - na lumbar na ike njem mkpọ ibu ịgụta 35 34 Wheel Base 51 " ibu Ịgba 250 pound Onye na-agba Size 5'4 "- 6'3" ịgụta Onye na-agba Size 4'8 "- 5'7" ịgụta Agba Cobalt Blue, dara Burgundy Na m ọtụtụ ụbọchị nke ...
19 Jun 2015 | Comments Off on Honda, kpọsaanụ a New 250cc V-Ejima Bike, The VTR
Honda, kpọsaanụ a New 250cc V-Ejima Bike, The VTR Honda nwere tọhapụrụ ụfọdụ nkọwa nke ọhụrụ ha 250cc v-ejima ntinye-larịị bike, na VTR, nke na-ada ka akwụkwọ ozi atọ anyị nụrụ ọtụtụ a oge tupu. mgbagwoju anya? Ị ga-anya-echefu ihe mgbagwoju anya mgbe ị na-agụ pịa ntọhapụ n'okpuru. Anyị hụrụ ya ike afo onwe anyị, na okwu dị ka The kasị elu-edu nkwusioru mmiri larịị bumpy okporo ụzọ ma na-eme ọhụrụ VTR ụtọ maka ụbọchị niile ịnya. , n'agbanyeghị na ọ bụ ezie na, anyị adịghị ...
Ben si Electric Motorcycle (B.E.M) update 8/12 Nọkwasịrị na bike na-arụ ọrụ taa, n'agbanyeghị na batrị mkpọ mbipụta. M zụrụ a 72V LifePo mkpọ si J.Randall ike ngwọta. Ọ na-abịa sensọ nke ọ bụla cell na a na kọmputa na-egosiputa temp, voltaji, ike. Ọ ga-abụrịrị a oké upgrade. Otú ọ dị, M nwere na-eme ka a ọhụrụ batrị ụlọ site ọkọ na m adịghị mma welder ka were a ogologo oge. Mgbe ahụ, mgbe m lụrụ na mere na-ekirikarị ihe nile elu. M ghasara kọmputa nri na ...
Honda CBR 150R 2012 Bikes First Gbaa ịnyịnya Bikes 135cc-165cc Autocar India
19 Jun 2015 | Comments Off on Honda CBR 150R 2012 Bikes First Gbaa ịnyịnya Bikes 135cc-165cc Autocar India
Honda CBR 150R review, ule ride The mkpado "CBR" ọ bụchaghị gosiri ihe si-na-esi sports bike. Ya mere, ihe agwa ka nwa CBR, na CBR 150R egwuregwu? Dị ka anyị hụrụ na Honda si CBR 250R, na "CBR” aha mkpado adịchaghị gosiri ihe si-na-esi sports bike. Ya mere, ihe agwa ka nwa CBR, na CBR 150R egwuregwu? A ngwa ngwa mbụ ride nyere anyị a mma echiche. Ọbụna mgbe akasiakde ogologo na ike na CBR 150R, o yiri ka a mmepụta oyiri nke 250. The Y ekara headlamp, ...
2006 Honda VFR800 interceptor – #x0024;7650 (North Denver) Anyị na-na-eru nso na nso pulite. a zuru okè oge ịtụfu a ụkwụ n'elu a ọhụrụ ọgba tum tum! A VFR ga-abụ ihe na ezigbo oke maka nke a ụdị ihe. na dị ka ọ dị nnọọ ka na-eme, M nwetara otu maka ire! Ya mere, n'ọnọdụ gị ike-akwụ ego m ga-enye gị a ọgba tum tum nwere a ole na ole atọ mgbanwe mere, dị ka nke ọma dị ka ndị a pụrụ ịdabere na dị ka gị nkezi nkume. Nke a bụ nke abụọ 6 ọgbọ VFR m na ekesịpde, ...
2WD ọgba tum tum Isi Abụọ wheel mbanye ọgba tum tum nwere ike ihu ọma-kewaa elu abụọ sara mbara iche iche; ndị na n'ibu mbanye site n'agbụ ma ọ bụ akụ, na ndị na-eji haịdrọlik ...
More si na nkebi nke a
anyị na-anwale: Suzuki SFV 650 Gladius – obere crank (foto, video) Mosaicsallthewa…
Suzuki Burgman skuuta-agba na mmanụ ụgbọala cell Green Tech – CNET News
2007 Spyker F8-VII Eight sịlịnda Engine ka Ọfọn BatuCars
2008 Suzuki B-King anwale!
Onye na-agba Training NZ – 0800 LRN2RD – Mụta Gbaa ịnyịnya a Motorcycle, Basic njikwa…
The ọhụrụ S4 Fogarty, n'ezie ntabi classic, bụ a ụtụ ịtụnanya ọrụ nke a anọ na-oge WSBK mmeri. A erikwa bike nke kasị nghọta enthusiasts. Ọkaibe ...
Kawasaki Ninja 650R 2012 Price na m ...
Kawasaki Ninja 650R 2012 Price na India – nkọwa Bajaj Auto ka ẹkenam ndị niile ọhụrụ 2012 mbipụta nke Kawasaki Ninja 650R superbike urua. N'ihi na gị eze ozi ...
2008 Kawasaki Concours 14 Sport Touring Motorcycle – Full Review nke…
Kawasaki Vulcan 1500 akpagharị akpagharị : Wikis (The Full Wiki)
Olee otú Iji nwalee Fuel mgbapụta na Kawasaki Ninja ZX-6R eHow
1998 Kawasaki zx-7R * ibuot Turner * ZX7
Mkpa Asịwo si Nduzi Kawasaki Z1 na Z900 – webBikeWorld
Suzuki B-King Final prototype Bike Kawasaki Square Anọ Ducati Desmosedici GP11 Suzuki B King Concept Suzuki AN 650 Royal Enfield mgbo 500 classic ọgba tum tum Honda Dream Kids Dokitto Bajaj Discover Bike Kawasaki Ea-6n Moto Guzzi 1000 Daytona Ọgwụ Ducati Diavel Honda Goldwing prototype M1 Honda DN-01 Automatic Sports ugbo agha Concept smart eScooter MV Agusta 1100 Grand Prix Aprilia Mana 850 Honda X4 Low Down Brammo Enertia Honda DN-01 Harley-Davidson XR 1200 echiche Ducati 60 Na a ọgba tum tum Honda Suzuki Colleda CO Indian Chief Classic KTM 125 Race Concept